Lozam-pifamoivoizana: taxi-be telo niharan-doza teny Avaradrano | NewsMada
Lozam-pifamoivoizana: taxi-be telo niharan-doza teny Avaradrano
Miseholany eny ihany ny lozam-pifamoivoizana. Tratran’ny loza ny taxi-be telo omaly. Soa ihany fa tsy namono olona ireo. Betsaka ny fahavoazana.
Nisehoana lozam-pifamoivoizana teny Manjaka Ilafy sy Ambatobe ary Ambatomaro. Nodomina kamiao nitondra simenitra ny taxi-be iray H, teny Manjaka Ilafy omaly maraina. Naratra ny mpandeha maromaro ary nalefa any amin’ny hopitaly. Tapaka naharitra mihitsy ny lalana vokatr’izany.
Namoa-doza ihany koa ny taxi-be 192 iray teny Ambatobe, omaly. Niala lalana ary nanimba zavatr’olona ity fiara ity. Nambaran’ny olona teny an-toerana fa tsy nitana ny hisatr’io fiara io ka namantana tamin’ny tamboho. Biraom-panjakana no eo amin’ilay toerana. Soa ihany fa tsy nisy ny olona naratra vokatr’izany fa betsaka kosa ny fahasimbana.
Nitrangana lozam-pifamoivoizana ihany koa teny Antsobolo Ambatomaro, omaly maraina, ka voadona tamin’izany ny andrin-jiro iray. Vokany, tapaka ny jiro eny amin’iny faritra iny omaly tontolo. Nampimenomenona ny olona ity loza ity, nanimba zavatra ary saika nitera-doza mahatsiravina.
Amin’ny ankapobeny, tsy fitandremana ny mahatonga ny loza. Ny mpamily izay tsy mitandrina, ankoatra ny fiara mety ho efa misy olana. Ireo taxi-be, ny taksiborosy matetika no mamoa-doza eto amintsika. Na an-drenivohitra na amin’ny lalam-pirenena.
Tsy ampy ny fanaraha-maso ataon’ny tompon’andraikitra amin’ireny fiara fitaterana ireny. Eo ihany koa ny mpamily, tsy fantatra mazava ny fomba nahazoany ny fahazoan-dalana hamily fiara. Toe-javatra mandeha ho azy eto amintsika ny fahalalahan’ny fakana fahazoan-dalana. Sao fotoana hijerena ifotony, raha ilaina ihany koa, ny mari-pahaizana vao afaka maka fahazoan-dalana mamily fiara? Mety hampihena ny lozam-pifamoivoizana izany?